1. အလူမီနီယံသတ္တုစပ်အသေ-ပုံသွင်းအခွံ၊ မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းပြီး အသွင်အပြင်သည် လှပသည်။
2. ၎င်းသည် မြင့်မားသော borosilicate tempered glass ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအဖုံး၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအဖုံးကို atomization နှင့် anti-glare ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်သည်၊ အပူပေါင်းစပ်မှုကိုခုခံနိုင်ပြီး၊ အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% အထိရှိသည်။
3. မြင့်မားသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော Stainless steel နှင့်ထိတွေ့ထားသောတွယ်ကပ်များ။
4. အဆင့်မြင့် drive ပါဝါနည်းပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားထည့်သွင်းမှု၊ အဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်။
5. နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် LED မော်ဂျူးများစွာ၊ အဆင့်မြင့်အလင်းဖြန့်ဖြူးမှုနည်းပညာ၊ အလင်းနှင့်ပင်အလင်း၊ အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု 120lm/w၊ မြင့်မားသောအရောင်ဖော်ခြင်း၊ အသက်တာရှည်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း။
6. လေ၀င်လေထွက်လမ်းညွန်ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော အပူ-အငွေ့ပျံသောလေလမ်းကြောင်းညွှန်သည့် groove သည် LED မီးအရင်းအမြစ်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေသည်။
1. မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ပြီးနောက် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အမှတ်အသားကို ပေါင်းထည့်ပါ။သီးခြားလက္ခဏာမှာ- "ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် - သတ်မှတ်ချက်ကုဒ် + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံခြင်းအမှတ်အသား + မှာယူမှုအရေအတွက်"။ဥပမာအားဖြင့်၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မျက်နှာကျက်မီးအိမ် 30W လိုအပ်ပြီး အရေအတွက် 20 အစုံဖြစ်ပါက၊ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်မှာ- မော်ဒယ်- BAD63-သတ်မှတ်ချက်- A30X+ExdmbIIC T6 Gb+20 ဖြစ်သည်။
2. ရွေးချယ်ထားသော တပ်ဆင်မှုပုံစံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်၊ မီးခွက်ရွေးချယ်မှုလက်စွဲတွင် P431~P440 ကို ကြည့်ပါ။
3. အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါက မှာယူမှုတွင် သတ်မှတ်ပေးပါ။
ယခင်- FC-ZFZD-E6W-CBB-J မီးအရေးပေါ်အလင်းရောင် / CBB-6J စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အရေးပေါ်အလင်း
ပေါက်ကွဲခြင်း သက်သေ Led မီးချောင်းများ
FCBJ စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်းဒဏ်ခံ acoustic-optic annu...
Model Implication Features 1. ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ငြိမ်ဆေးဖြန်းထားသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ် အခွံသည် လှပသောအသွင်အပြင်။2. ပြင်ပ အသံမြည်သံ၊ ကျယ်လောင်ပြီး အကွာအဝေး။3. စထရိုဘိုစကုပ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အကွာအဝေးအထိ သတိပေးအလင်းရောင်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။4. အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအား OT terminals များဖြင့် အအေးခံထားပြီး အင်္ကျီလက်ဖြင့် လျှပ်ကာထားကာ လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို တည်ငြိမ်စေရန် အထူးလျော့ရဲသောအုတ်ပြားဖြင့် တင်းကြပ်ထားရမည်။5. Ⅰ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အဖုံးသည် ခိုင်ခံ့မာကျောသော အကာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
မော်ဒယ်၏သက်ရောက်မှုအင်္ဂါရပ်များ 1. အလူမီနီယံအလွိုင်းကာစ်ခွံ၊ အသေပုံသွင်းခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ဖျန်းခြင်း၊ လှပသောအသွင်အပြင် သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပွတ်ထားသော မျက်နှာပြင်၊2. သံမဏိပိုက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်ကြိုးဝါယာကြိုး;3. လျော်ကြေးပေးစက်ကို လိုအပ်သလို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ အမိန့်မှတ်ချက် 1။ ပုံမှန်ရွေးချယ်ရန်အတွက် မော်ဒယ်သက်ရောက်မှု၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၊ မော်ဒယ်၏သက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် Ex-mark ထည့်သင့်သည်။နမူနာပုံစံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်အတွက် ကုဒ် +Ex-mark.ဥပမာ၊ w...
Model Implication Features 1. Explosion-proof type "သဲများပြည့်နေသော ရှုပ်ထွေးမှု၏ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ဘေးကင်းရေး" သို့မဟုတ် "ဖုန်မှုန့်များ ပေါက်ကွဲခြင်း" နှင့် သက်ဆိုင်သော ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆင့်တွင် တစ်ချိန်တည်း တည်ရှိနေပါသည်။2. အလူမီနီယံသေတ္တာခွံ၊ မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းဆေး၊ လှပသောအသွင်အပြင်။3. တောက်ပမှုမြင့်မားသော LED မီးဘုတ်ကို အသုံးပြု၍ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသော၊ တာရှည်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော အကျိုးကျေးဇူးများ။4. Built-in ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Ni-MH ဘက်ထရီထုပ်၊
Model Implication Features 1. Aluminum alloy die-casting shell, မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဖြန်းထားပြီး ပုံပန်းသဏ္ဍာန် လှပပါသည်။2. ရေတိုင်ကီအား ပြင်းထန်သောအပူစီးကူးမှုနှင့် ကောင်းသောအပူကို ပျံ့နှံ့စေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဆန့်နိုင်အားရှိသောလူမီနီယံသတ္တုစပ်ပစ္စည်းမှ ဆန့်ထုတ်ထားသည်။3. နေရာအမျိုးမျိုး၏အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သောကွင်းစကွင်းပိတ် သို့မဟုတ် လမ်းမီးတိုင်ချိတ်ဆက်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။4. လမ်းမီး ဒီဇိုင်းကို လမ်းနှစ်သွယ်အတိုင်း ဒီဇိုင်းထုတ်သည်..။
Model Implication Features 1. ၎င်းကို အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မာကျောမှုမြင့်မားသည်။အပြင်ပိုင်းကို သဲဖြင့် ပက်ဖြန်းသင့်ပြီး လမ်းချော်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်သည် တင်းမာပြီး လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။2. မီးချောင်းများတွင် သံလိုက်ခလုတ်တစ်ခုပါရှိပြီး သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ရေစိုခံနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။3. ၎င်းသည် မြင့်မားသော မန်မိုရီမဟုတ်သော ဘက်ထရီကို အသုံးပြုသည်။ကြီးမားသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ တာရှည်ခံမှု နှင့် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း နည်းပါးသော adva-nantes အချို့ရှိပါသည်။4. ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူး b...